Offroad Drive အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
3.4 | 1,000,000+ ထည့်သွင်းရန်
ဒေါင်းလုပ် XAPK（40.8MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Offroad Drive : 4x4 Driving Game
သင်၏ 4x4 jeep ကိုအရူးအမူးဆင်ခြေဒေသများရှိ jeep ကိုမောင်းပါ။ သင်ဂိမ်းများကိုပရိသတ်များနှင့်ကားမောင်းခြင်းကိုနှစ်သက်သည်မှသာလျှင်သာဖြစ်သည်။ သင်၏ Cruiser ကို outroad drive လုပ်ရန်နှင့်သင်၏ offroad cruct ည့်ခံရပ်ကွက်နှင့်မောင်းနှင်မှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာရန်သင့်တွင် GUTS ရှိလျှင်။ ဒီဂိမ်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။ ဒီဂိမ်းမှာ 4x4 SUV Jep Jep Jesp Jev Jep Joelt မှာရှိတဲ့ကုန်တင်ကားကြီးနဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိတဲ့ကုန်တင်ယာဉ်နဲ့ 3D ဂိမ်းတွေမှာ 3D ဂိမ်းတွေမှာ 3D ဂိမ်းတွေမှာ 3D ဂိမ်းတွေမှာ 3D ဂိမ်းတွေမှာ 3D ဂိမ်းတွေမှာ 3D ဂိမ်းတွေပါ0င်ပါတယ်။ ၎င်းသည် offroad drive ကဲ့သို့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအင်္ဂါရပ်များရှိသည် - 4x4 Game Simulator သည်လမ်းမောင်းခြင်းမဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်လမ်းဂိမ်းသို့မဟုတ်အကောင်းဆုံးခရီးသွားကားမောင်းသူယာဉ်မောင်းဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်။ Offroad Car Drive သည်အန္တရာယ်များသောအန္တရာယ်များသည်အလွန်အန္တရာယ်များသောကြောင့် Sideroad 4x4 မောင်းနှင်မှုတွင် Sideroad 4x4 မောင်းနှင်မှုတွင်ရှင်သန်နိုင်သည့်ကားမောင်းသူသာရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်။ ကားမောင်းဂိမ်း Simulator 3D ဂိမ်း။ အကယ်. သင်သည်လမ်းခရိုင်၏ပန်ကာကိုကြည့်ပြီးလမ်းခရီးတွင် 4x4 jeep လမ်းပေါ်တွင်ပြိုင်ပွဲ၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူ drive ကို drive တွင် drive) သင်၏ FJ 4X4 Cruiser ကိုကားမောင်းခြင်းနှင့်ဤ Jeep Hill တွင် 4x4 Hill Driver နှင့် Jeep Hill ကားမောင်းသူဖြစ်လာသည်။ သင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောနျအဖား SUVs, 4x4 Rover, စစ်တပ်ကုန်တင်ကုန်တင်ကားများ, နဂါးစစ်ထရပ်များနှင့် 4x4 Jeeps ကိုသင်မောင်းနှင်နေလိမ့်မည်။
4x4 ကားမောင်းခြင်းဂိမ်း - ကား Drive Game Simulator 3D ။ Land Cruiser Car DriveGame Simulator 3D Jeep Dread Jeep Jeep Jeep Dew Jehn Jehn Hair Hour Crazet School နှင့်စစ်တပ်တောင်တန်းများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုအရူးအမူးစွဲလမ်းသည့် ReneGo Road Teep နှင့်အတူ 2xl MX လမ်းခရီးတွင်ပါ အခမဲ့ထိပ်တန်းလှုပ်ရှားမှုကြေးနီ Prado Stunt ကားမောင်းခြင်းဆုရရှိရန်အတွက်ပြိုင်ကားခြင်းများ။
အကယ်. သင်က 4x4 ဂိမ်းများနှင့်အဆုံးစွန်သောဂိမ်းများကဲ့သို့သော offroad ဂိမ်းများကိုအမှန်တကယ်နှစ်သက်သောအလုပ်များပါ။ သင်၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထရပ်ကားဖြင့်သင်၏ Off Road Truck Simulator ကိုဖွင့ ်. သင်၏လမ်းပေါ်ရှိထရပ်ကားမောင်းနှင်မှုကိုပြပါ။ ကစားနိုင်သည့်ပြိုင်ပွဲကားဂိမ်းများသည်ဤပြိုင်ပွဲတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော TRION CAR CAR 3D ရှိသည့်အမြန်နှုန်း4ခုလိုအပ်သည်။ 4x4 မောင်းနှင်မှုဂိမ်း Simulator သည်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော 4x4 ကား drivie ၏အကောင်းဆုံးပတ်0န်းကျင်နှင့်အတူအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤသည် offroad ဂိမ်းသည်သင်၏ပြိုင်ကားများအပေါ်ထားရှိသောသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်လမ်းဘေး Rover 2017 ၏လက်တွေ့ကျသည်။ ဤအရာကိုလမ်းပြိုင်ကားများနှင့်စစ်တပ်ထရပ်ကားများကိုကစားပါ။
ဒီကား - x က Rear Root Root Car Racing ဟာ ​​Real Drag Battle ဟာ Real Drag Battle: အခမဲ့ကားတစ်စီးပြေးပွဲပါ။ ဤဆွဲခြင်းဂိမ်းသည် Real Racing သည်ကမ္ဘာ့ပြိုင်ပွဲဂိမ်းသည် Real Offroad Drag အတွက်လိုအပ်သည့် Draging Grack ဂိမ်းဖြစ်သည်။ အလိုလိုအလိုအလျှောက်အလိုရှိသည့် offroad လိုအပ်ခြင်းသည် Rice Real CXR ပြိုင်ပွဲဂိမ်းနှင့်အတူ Rice Racing Game ကိုဆွဲယူခြင်းဖြစ်သည်။ ဤ offroad ဂိမ်းများနှင့်ပတ်သက်သောအရာအားလုံးသည်ကားမောင်းခြင်းအားအကောင်းဆုံးကားများကဲ့သို့ကားမောင်းခြင်းနှင့်ကားမောင်းခြင်းအားအကောင်းဆုံး offroad drive အတွက်ကားမောင်းခြင်းနှင့် Jeep Drive Legends ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ လမ်းကြောပိတ်ဆို့မှုအပြည့်အဝ HD နှင့် 3D ဂိမ်းများတွင် HD နှင့် 3D ဂိမ်းများတွင် 3D Games တွင် 3D ဂိမ်းများတွင် 3D ဂိမ်းများတွင် 3D ဂိမ်းများတွင် 3D ဂိမ်းများတွင် 3D တို့တွင် 3D ဂိမ်းများဖြစ်သည်။ 4x4 မောင်းနှင်မှုဂိမ်း simulator နှင့်လမ်းဂိမ်းကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သူများအတွက်။
ဘာအသစ်လဲ Offroad Drive : 4x4 Driving Game 1.2.7
Offroad drive : 4x4 driving game | Best Android Gameplay HD
Offroad Drive 4x4 Drivng Game // Zorlu 4x4 Offraod Oyunu Android Gameplay FHD